Ravalomanana/Rajoelina : Nodorana velona ny zana-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana/Rajoelina : Nodorana velona ny zana-bahoaka
Habibiana tsy roa aman-tany no nozakain’ny vahoakan’Antananarivo vokatry ny fitiavan-tenan’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ny taona 2009. Nodorana velona ny vahoaka, razana may kila forehitra miisa 25 tsy nisy nahafantarana azy intsony no navoakan’ny mpamonjy hain-trano tao amin’i Trading Center ho an’ireo izay fohy fitadidy, mpanohana ny TIM sy ny MAPAR.
Mivantana any amin’ny SEFAFI, milaza azy ho mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena ny mason’ny mpanara-baovao. Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina fototry ny vonoan’olona sy ny fandorana ary ny fandrobana teto ny taona 2009 mantsy no miara-dia, ary mbola mitady hamerina ireny zava-doza niseho teto ireny amin’ny sabotsy ho avy izao. Toa mangiana eo anatrehan’izany loza mitatao ho an’ny firenena izany anefa ny SEFAFI, mba tsy ilazana hoe miray feo amin’izy ireo. Mitamberina ao anatin’ny minitra sy segondra vitsy tokoa mantsy ny zava-nitranga, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fandorana velona ny zana-bahoaka tao amin’ny Trading Center, rehefa mahita izao fihetsika ataon’ny TIM sy ny MAPAR izao, izay samy tompon’andraikitra feno tamin’ireny zava-doza teto ny taona 2009 ireny.
Tsy nisy fianakavian’ny SMM tokoa angaha isan’ireo maty nodorana velona tao amin’ny Trading Center Analakely ny taona 2009, ka adinon’ity sendikan’ny Mpitsara izay mivondrona ao anatin’ny SSM ny mampahatsiahy na koa mampitandrina an’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina loharanon’ny loza tamin’izany fotoana, manoloana izao fikasana hamerina ny zava-nitranga teto ny taona 2009 amin’ny sabotsy ho avy izao. Mbola tsy nisy fitsarana na fanadihadiana nisokatra manodidina ireny fandorana velona ny zana-bahoaka ireny koa nahoana no mangiana ny SMM?
Mitebiteby sy velom-panahiana daholo indray ny vahoakan’Antananarivo: ho rava daholo indray ny fananana, ho may daholo indray ny tranombarotra, handriaka indray ny rà, ary hiverina tsy an’asa daholo indray noho i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina.